Ver ရခိုင် ညောင်ချောင်းဒုက္ခသည်စခန်းမှာ ရိက္ခာ အခက်အခဲဖြစ်နေ - Series y Programas
▷ရခိုင် ညောင်ချောင်းဒုက္ခသည်စခန်းမှာ ရိက္ခာ အခက်အခဲဖြစ်နေ
■ ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်တော်မြို့နယ် ညောင်ချောင်း စစ်ဘေးဒုက္ခသည်စခန်းမှာ အစိုးရက လစဉ်ထောက်ပံ့တဲ့ ဆန်ရိက္ခာတွေ ဒီနေ့အထိ မရောက်တာကြောင့် စစ်ဘေးဒုက္ခသည် ၃၀၀၀ ကျော် စားရေး၊သောက်ရေး အခက်အခဲနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ စခန်းတာဝန်ခံနဲ့ ဒုက္ခသည်တွေက RFA ကိုပြောပါတယ်။
ဒီအကြောင်းကို RFA ဝိုင်းတော်သူ ဒေါ်ခင်ခင်အိ တင်ပြပါလိမ့်မယ်။
ရခိုင္ ေညာင္ေခ်ာင္းဒုကၡသည္စခန္းမွာ ရိကၡာ အခက္အခဲျဖစ္ေန
■ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ေညာင္ေခ်ာင္း စစ္ေဘးဒုကၡသည္စခန္းမွာ အစိုးရက လစဥ္ေထာက္ပံ့တဲ့ ဆန္ရိကၡာေတြ ဒီေန႔အထိ မေရာက္တာေၾကာင့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္ ၃၀၀၀ ေက်ာ္ စားေရး၊ေသာက္ေရး အခက္အခဲနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရတယ္လို႔ စခန္းတာဝန္ခံနဲ႔ ဒုကၡသည္ေတြက RFA ကိုေျပာပါတယ္။
ဒီအေၾကာင္းကို RFA ဝိုင္းေတာ္သူ ေဒၚခင္ခင္အိ တင္ျပပါလိမ့္မယ္။
CANTIDAD DE VISITAS QUE TUVO EL VIDEO : 11367 PERSONAS LO VIERON
FECHA EN LA QUE SE SUBIO EL VIDEO 2021-04-13 13:03:57 📅
Nant Min Min Pyone dice:
စစ်တွေက သင်္ကြန်ကျနေသူတွေ ဆုတောင်းပေးနေတယ် သနပ်ခါးသွေးပြီး
อาร์ โมบาย dice:
Kyaw Thu Ra Tun dice:
ကိုယ့်အမေကိုယ်လိုး ဗမာကြီးစိုးရေးဝါဒီကိုလက်ကိုင်ထားတဲ့ ဗမာတွေအုပ်ချုပ်တဲ့ကြေးစားတပ်တွေရဲ့စောက်ကျင့်က မောင်ဝိုင်းလက်ထက်ကနေ ဒီကနေ့အထိ အောက်တန်းစားအတွေးကပျောက်မသွားဘူး၊စစ်ဖြစ်ရင် လက်နက်မရှိတဲ့ပြည်သူကိုအနှိုင်ကျင့်ရမှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ယုတ်မာတဲ့အတွေးအခေါ်ကို ဆင့်ကဲမျှဝေလာလိုက်တာ၊ဖျောက်လို့မရတဲ့ဟာက မောင်ဝိုင်းလက်ထက်က အသက်သေမှာကြောက်လို့တိုင်းတပါးကို ထွက်ပြေးခဲ့ကြရတဲ့ရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့မျိုးရိုးစဥ်ဆက်တွေက ဒီကနေ့ထိ ဘင်္ဂလာဒေချ်မှာထောင်နဲ့သောင်းနဲ့၊ ယုတ်မာတဲ့အတွေးစိတ်ကိုကမျိုးရိုးဗီဇအတိုင်းဖြစ်လာရတော့ရှောင်လွှဲလို့မှမရတာ ၊
Myo Min Khaung dice:
စစ်အာဏာရှင်သောင်းကြမ်းသူတွေဟာ တိုင်းပြည်ကို ဘယ်လိုမှအုပ်ချုပ်နှိုင်မှုစွမ်းအား မရှိတော့ပါဘူး။ စစ်အာဏာအမိန့်တွေ ဘယ်လောက်ဘဲထုတ်ထုတ်၊ CDM လုပ်နေတဲ့ ဝန်ထမ်းသူရဲကောင်းများကတော့ အလုပ်မဆင်းကြတော့ပါဘူး။ ဘဏ်တွေလဲ မလည်မပတ်၊ ဆေးရုံတွေလဲပိတ်၊ ကျောင်းတွေလဲပြန်မဖွင့်နှိုင်၊ စစ်တပ်ထဲမှာလဲ ရိက္ခာပြတ်၊ အင်တာနက်ပြတ်လို့ သူတို့အချင်းချင်းလဲ အဆက်အသွယ်မလွယ်ကူ၊ စစ်သားတွေကလဲ စစ်တိုက်ချင်စိတ်မရှိတော့နဲ့ အဖက်ဖက်က တိုင်းပြည်ကို မအုပ်ချုပ်နှိုင်တော့ပါဘူး။ စစ်အာဏာရှင်တွေဟာ နေ့စဉ်ကျဆုံးနေပါပြီ။ ပြည်ထောင်စု ဖက်ဒရယ်တပ်မတော်ကြီး ချီတက်လာတဲ့နေ့မှာတော့ စစ်အာဏာရှင်တွေဟာ ဆဒန်ဟူစိန်လို ကျွက်တွင်းတွေထဲမှာ ဝင်ပြီး ပုံးရမဲ့ အချိန်ကိုရောက်နေပါပြီ။ အရေးတော်ပုံ အောင်မြင်ဘို့က နီးသထက်နီးလာနေပါပြီ။ အားတင်းထားပြီး ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ကြပါစို့။
We people are the real power! We are the strength! We people are the powerful weapon that will destroy the cruel military junta! We cannot afford to wait anymore for the UN or any world bodies to help us. As long as China and Russia are there in the Security Council, no country can help us through the UN. Whether the world cares for us, or the world can care for us, leave it to them. We have to rely on ourselves. We are going to have our victory with or without these help. The real strength is within us, “ourselves”. We will buildapowerful army and buy weapons from brotherhood countries like South Korea, and will pay back when we have liberated our country. We will buy powerful and modern guns, drones, surface to air missiles, and other weapons from South Korea and fight back the ruthless junta. We now give NOTICE to the junta. Your days are numbered! We are the real power. We want DEMOCRACY and DEMOCRACY is what we will get! Let’s march!
Kyaw Creation dice:
ျမန္မာမွာ အစုိးရ မ႐ိွေတာ့တာ သူတို႔ သတိမျပဳမိပါ။ အစိုးရ ဆိုတာကို ေစာင့္မေနသင့္ေတာ့ပါ။
Thandar Win dice:
ပြည်နယ်ကောင်စီ နဲ့ AA ကို တောင်းလေ၊ စိုက်တွေ (စစ်တွေ) က သကြ်န် ကျင်းပ နေတဲ့သူတွေ သောက်တလွဲ အချိန်အခါ မဟုတ် ပျော်ရွှင်နေမဲ့အစား နင်တို့ လူမျိုးတွေ အငတ်ဘေး မကျအောင် ကယ်ကြရင် ကုသိုလ် ရပါတယ်။
Thomas kukumuda dice:
UK govt report said that Myanmar started to exporting gas from the Shew gas project of the the Rakhine coastal since 2014.
400 millions of Cubic of gas produced everyday and.379 millions of Gas are exported to China and the rest of Gas are local use.
Saudi Arabia played major role in the shew Gas pipeline.
Suadi state owned Oil company Aramco sighed an MOU with China to supply 200,000 barrel of crude oil per day through this pipeline.
China Govt has been giving 12 Millions of US Dollars per year without Shew gas and crude oil from Rakhine costal offshore .
Bloody Myanmar Govt and its military juntas have been doing like Dracula and Vampires on Rakhine natural deposits without giving due shares for local social welfare since 2014.
Rakhine state must own 50% of Shew Gas and other 50% of it would share to Federal government of Myanmar..
This pipeline is going to main supply chain for China from Gulf countries and African countries in nextafew years.
Myanmar govt will get more benefits from this pipeline for sure.
Demand taxes on shew gas pipeline.
Rip Earth dice:
PENCHANT _For _JUSTICE dice:
ေအာ္ရခိုင္ရို႔ေလ ။ ဘဂ္ါလီအႏြယ္တိ‌ေလာက္ပင္ ကမ႓ာ့စာနာမႈ ကူညီမႈကိုမရ။ အစိုးရကိုေတာ့စကားထဲထၫ့္မေျပာဗ်ာယ္။
April Flower dice: